Agriculture, Fishing & Forestry Jobs in Myanmar | MyJobs
Agriculture, Fishing & Forestry Jobs in Myanmar
ကျွန်းပင်း/ယူကလစ် အပင်းများ၏ ပိုးမွှားများမကျ ကာကွယ်နိုင်ရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေးရန် စိုက်ခင်း၏ လုံခြုံရေး ကွင်းပတ်မှတ်တမ်များ စစ်ဆေးရန် စိုက်ပျိုးရေး၏ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အကောင်အထည်ဖော်ရန် ၊ အစီစဉ်များ ချပေးရန်
ကျွန်းပင်း/ယူကလစ် အပင်းများ၏ ပိုးမွှားများမကျ ကာကွယ်နိုင်ရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေးရန် စိုက်ခင်း၏ လု ...
At least (3-5) years experiences in manufacturing field Can use Advance Excel and Accounting Software’s
At least (3-5) years experiences in manufacturing field Can use Advance Excel and Accounting So ...
Liaison Officer ( MRT agriculture )
An experienced liaison officer leading to general manager or deputy general manager, who have to distribute fertilizer in partnership with foreign investors in local market and well prepare and analysis of feasibility survey for fertilizer market and manage factory set up and distribution.
An experienced liaison officer leading to general manager or deputy general manager, who have to ...
တောင်သူများ၏ ဘဝတိုးတက် မြင့်မားစေရန်။
တောင်သူများထံသို့ ထိရောက်သော ဝန်ဆောင်မူများ ပေးနိင်ရန်
Assistant Manager (Sittwe)
Sr. Auditor ( Head Office)
Security ( Lashio and Naung Cho)
Junior Accountant (Naung Cho and Lashio)
Sales Manager (Lashio)